Baarlamaanka oo wax ka su'aalay wasiirka caadaaladda tijaabada luuqadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baarlamaanka oo wax ka su'aalay wasiirka caadaaladda tijaabada luuqadda
La daabacay torsdag 4 december 2014 kl 17.52
Waxay aheyd 12ka bisha november markii barnaamijka Uppdrag Granskning ee ka baxa telefishinka SVT ka shifay in tijaabada luqaadda ee laga qaado ruuxa magangeliyo doonka ah ay buuxaan qalalaad iyo tayo xumo.
Arbacaddii todobaadkan waxaa arrinkas baarlamaanka hortiisa wax laga weydiiyey wasiirka cadaaladda Morgan Johansson (S) oo wasaaraddiisu masuul ka tahay arrimaha socdaalka.
Xildhibaanada wax ka weydiiyey wasiirka arrimahan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaanad Désirée Pethrus oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Kristdemokraterna. Waxayna weydiisey "maxaa laga yeelayaa dadka ay arrintan saameysey".
Laakiin su'aalshas kooban ayuusan wasiirka cadaaladda wax jawaab ah ka baxinin. Wasiirka ayaa ku gaabsadey in toban ka mid tijaabada luuqadda oo ay shirkadda Sprakab u sameysey heyadda socdaalka loo direy dalka Holland si baaritaan loogu sameeyo bal in sida warbaahinta sheegtey ka buuxaan qalalaad iyo tayo xumo iyo in kale. Natiijada baaritankasna jawaabtiisa ay soo baxi doonta bisha Januari sannadka cusub. Wasiirka waxuu ku gaabsadey in uusan ka hordhaci karin natiijada baaritaanka.
Raadiyaha Sweden laanta af-soomaaliga ayaa isla su’aalshas ah ”Maxaa laga yeelaya dadka ay saameysey tayo xumadda tijaabada luuqada”weydiiyey qaybta warbaahinta u qaabilsa heyadda socdaalka balse jawaabtana sidoo kale waxay noqotay in aysan doonin in ay ka hor-dhacaan naatijada baaritaanka, heyaddana ay ka duuleyso in aysan jirin wax qalad ama tayo xumo ah oo ku jira tijaabada luuqadda ee ay shirkadda Sprakab u sameyseo.
Xildhibaanad Désirée Pethrus ayaa ku qancin jawaabta ay ka heshay wasiirka cadaaladda inkastoo sida ay tiri fahmeyso in wasiirka uu arrimahan si faahfaahsan uga hadli karin, maadaame ay socoto baaritaanka arrinta lagu sameynayo.
Arrinkan laga hadalayo ee ah tijaabada luuqadda ayaa ku sabsan, haddii ruuxa magangeliyo doonka ah uusan wadan wax waraaqo aqoonsi ah, markas hey'adda socdaalka ayaa ruuxa ku saaciddo tijaabo laga qaado luuqadda ama lahjadda uu ruuxa ku hadalyo si loo xaqiijiyo bal in ruuxa halka uu sheeganayo in uu yimid, luuqadeeda ama lahjadeedna ku hadlayo, sidoo kale waxaa wax laga weydiiyaa aqoonta uu u leeyahay degaanka uu sheeganayo. Muddo 20 daqiiqo ah ayaa ruux magangeliyo doonka wareysi looga qaadaa telefoon, waxaana arrinkan ay heyadda socdaalka u wakiilatay shirkad la yiraahdo Sprakab.
12kii bishii November ayaa barnaamijka ka baxa telefishinka SVT ka shifey in tijaabada luuqadda ay ka buuxdo qalalaad iyo tayo xumo.
Xalimo Hassan Said ayaa ka mid ah dadka magangeliyo doonka ah ee arrintan saameysey. Xalimo waxay dalka Sweden timid 2012kii, 16 sanno jir ayey aheyd markas.
- Waan kula doodey oo waxaan dhahay dadkan ma garan karaan mesha aan ka imaadey. Ma ila soconin, wadadaan soo marey iyo cdkeyga midna ma garan karaan ayey tiri.
Xildhibaanad Désirée Pethrusadda Migrationsverket in ay dib u fiiriso kiisaska la tuhmayo in ay qalalaad ku jiraan tijaabadda luuqadda.
- Waxaan rabi lahaa in Migrationsverket dib u eegis ku sameyso kiisaska go’aanada laga gaaarey la tuhmayo in loo cuskadey sababo qaldan oo dadkan la siiyo frusad dib u tajiibin kiisaskooda, ayey tiri.
Baaritaanada luuqadda oo dib loogu noqonayo
tisdag 18 november 2014 kl 16.46
onsdag 12 november 2014 kl 15.22
Dood la xiriirta baarista luuqadda ee qaxootiga
tisdag 2 december 2014 kl 16.10
Laanta Socdaalka oo Holland u dirtay baadhitaan luuqado muran dhaliyay
tisdag 18 november 2014 kl 17.04